Liverpool oo ka warbixisay xaqiiqada ku aadan in Real Madrid ay dalab ka soo gudbisay Sadio Mané – Gool FM
(England) 15 Luulyo 2019. Ilo wareedyo ka tirsan kooxda Liverpool ayaa shaaca ka qaaday xaqiiqda ku aadan inuu jiro dalab kaga yimid Real Madrid kaasoo ay ku doonayaan adeega Sadio Mané inta lagu gudi jiro suuqan kala iibsiga ee xagaaga.
Madaxweynaha xiriirka kubada cagta ee dalka Senegal Augustin Senghor ayaa shalay sheegay in Sadio Mané uu dalab ka helay Real Madrid, isla markaana uu ka codsaday inay muhiim tahay ka hadlida dalabkan cusub, islamarkaana uu ka faa’iideysto fursadan uusan dib dambe u heli doonin.
Yeelkadeeda, Ilo wareedyadan ka tirsan kooxda Liverpool ayaa waxay u sheegeen “Liverpool Echo” ee dalka England in dalabka la sheegayo in Real Madrid ay kasoo gudbisay Sadio Mané ay tahay wax kama jiraan.
Sadio Mané wuxuu haatan ku sugan yahay dalka Masar oo ay kaga qeyb galayaan koobka qaramada afrika 2019, wuxuuna xulkiisa qaranka Senegal ku hogaamiyay inay u gudbaan finalka tartankan oo ay kula ciyaari doonaan Xulka qaranka Algeria.
Mané ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ka sameeyay kooxdiisa Reds qaab ciyaareed fiican, wuxuuna ku hogaamiyay inay ku guuleystaan tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League.